Nidaamyada 'Bentley Systems' waxay u sameeyaan ballanqaad adag GIS iyaga oo helaya Agency9 - Geofumadas
Oktoobar, 2018 Geospatial - GIS, tabo cusub, Microstation-Bentley
2004 ka dib markii Bentley biiray XFM horumar cusub ay V8i, Bentley yimid keenidda awoodaha meel u gudubtay Geographics dardaarmay in Bentley Cadastre, PowerMap iyo BentleyMap. Si kastaba ha noqotee, waxay had iyo jeer ahayd tikniyoolajiyad injineernimo, sidoo kale geo oo leh heer sare oo sax ah CAD oo injineerada, sahamiyayaashu iyo naqshadayaashu dalbadaan.
Kuweena isticmaalay BentleyMap tan iyo markii la aasaasay Maamulaha Geospatial, waxaan had iyo jeer baadi goob ugu jirnay goorta la arki karo tallaabada xigta. Waa ku qanacsanaanta weyn in warka ah in Bentley Systems ay heshay shirkad abuurtay CityPlanner iyo 3DMaps kaliya waxay muujineysaa suurtagalnimada uruurinta qorshahan ku dhashay 2003 ee Iswiidhan, laga soo bilaabo noocyadii hore ee muuqaalka xogta muuqaalka illaa xayeysiinta webka iyo is-dhexgalka. iskaashi ee tartanka sare maanta; kaliya waqti markii awooda geospatial ay ku kortay si fudud labada OpenSource iyo beeraha gaarka loo leeyahay.
Hadda oo aan ka mid nahay Bentley, waxaan ku kalsoonahay inaan gaarno awood buuxda oo caalami ah oo ku saabsan tabo cusub oo Agency9 ah. - Håkan Engman, agaasimaha guud ee Agency9.
Wakaaladda9 waxay saxiixday hirgelinta muhiimka ah ee magaalooyinka Waqooyiga Yurub, aag ay qadka Microstation sifiican looga soo dhoweeyay; Weli waxaan haystaa BeAward ee 2004 ee Orlando, markii Helsinki Cadastre ay ku soo bandhigtay tartankeedii qaybta Maareynta Deegaanka. Waxa kale oo qiimo leh in la aqoonsado in dhagaysiga dadka isticmaala ay saameyn ku yeelatay Bentley inay indhaheeda saarto xalkaan laga hirgaliyay magaalooyin fara badan oo ku yaal Sweden, iyada oo awood u leh inay dhexgalaan xogta sawir qaadista ee Bentley ContextCapture.
Maxay yahiin Hay'adda Xanuunku?
Ka hadalka alaabtu xoogaa way xaddidan tahay, iyada oo la tixgelinayo in kuwani aysan had iyo jeer muujinaynin awoodda ka dambeysa fikradda tiknoolajiyadda, marka lagu daro in wakaaladda9 ay si gooni ah ugu adeegtay in kasta oo ay si wada jir ah u matalayeen isla aruurinta aan hadda u malaynayno in Bentley uu si isdaba-joog ah ugu biiri doono khadka Digital Twin. Adeegyada. Si loo helo tusaale ka mid ah tan, Wakaaladda9 waxay leedahay ugu yaraan afar xal oo leh karti badan:
Iyada oo ku saleysan daruurta, xalkaani wuxuu diiradda saarayaa qorsheynta iskaashiga. Waxay u oggolaaneysaa in lagu arko 2D, 3D iyo xogta GIS jawi saddex-cabbir leh. Noqoshada webka, si dhib leh ayey ku qaadataa biraawsar si uu u shaqeeyo, xitaa qaabka abuurista.
Qiiqa CityPlanner wuxuu leeyahay udub dhexaad xad dhaaf ah oo waxtar leh, maadaama muuqaalka 3D aad u dhaqso badan yahay xitaa marka lala macaamilayo xog ballaaran. Sidaa awgeed, arrimaha sida qorshaynta isticmaalka dhulka, waxay leedahay awood badan, maxaa yeelay waa la arki karaa labada lakab ee joomatari adag ee heer qaran / heer gobol, iyo sidoo kale lakabyada xirmooyinka magaalooyinka oo leh qeexid saddex-cabbir ah
Qaar ka mid ah qoraalladayda Xisaabta Twitter Waxaan u soo bandhigay sida fiitamiin Earth Google.
Kuwa ugu fiican, awoodda tafatirka, awood u lahaanshaha inay ku shubto CAD, BIM, 3D, moodellada rasta ama caymiska adeegyada webka. Hawlaha qaarkood waxay ina xusuusinayaan ficilada macnaha guud ee tifaftiraha shabakadda OpenStreet Map, oo inbadan oo dabcan ah iyo wax ku oolnimo qiimo leh ku dhowaad -laakiin maaha wax badan- sidii inaan la ciyaareynay CityVille. Waxay u shaqeyn kartaa wadashaqeyn, si kooxuhu ugu shaqeeyaan qulqulka socodka laxiriira doorarka.
Tani waa go'an loo adeegayaa oo uu SDK, dhismaha daydo 3D oo leh qalabka photogrammetry Qas dhawaan caan hannaankii textured: DSM, Smart3DCapture, StreetFactory, PhotoScan, 360 view, images uugu iyo adeegyada heerarka Nice halkaas.
Kani waa ficil ahaan muuqaal daawade 3D ah, oo awood u leh inuu ku xirnaado habka wax ka beddelka jawiga magaalooyinka ee gudaha ama daruuraha, shaqsi ahaan ama dufcado, oo leh qaabab ay ka mid yihiin CityGML, KMZ, Collada ama joomatarirada SQL. Waxay badanaa la timaadaa 3DCityDatabase sida ugubucda ah.
Waa wax xiiso leh in ay u oggolaato maareyn hufan ee joomatari adag oo leh qaabab, oo leh qaab taariikh ah. Ku habboon dhismaha magaalooyin dalwaddii ah.
Kani waa maareeyaha xogta, kaas oo u oggolaanaya maamulka ilaha qaabab ama adeegyo kala duwan. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Noocyada dusha sare DSM / DTM: GeoTiff, ASCII faylasha
Geor-Tiff / JPG / PNG
Meelaha leh sawir muuqaal ah (PhotoMesh): Mawduuca Maqalka, PhotoScan, SURE, StreetFactory, Rapid3D
Daruuraha darajada: LAS
Jaangooyooyin joomatari: geesoolayaal, xariiqyo, dhibco ahaan raadad, geedo, alaabta guriga, iwm.
Ku saabsan adeegyada, waxay taageertaa:
Waxyaabaha lagaa bixiyo ee OGC heerarka macnaha WCS
Khariidadda iyo khidmadaha WMS, TMS, WMTS, Slippy
Adeegga ESRI Image
Iyo kuwa ugu wanaagsan, DigitalGlobe ImageService images
Soo helitaankan, Bentley wuxuu ku kasbaday awood aad u wanaagsan si uu u xaqiijiyo mataankiisa Dijital ah ee heer magaalo, oo leh awoodda CAD iyo BIM ee looga baahan yahay isbeddelka ku wajahan naqshadaha guud ee SmartCity.
Ku saabsan iibsashada hay'addaXXXXX
Bentley ayaa ku dhawaaqay iibsigan, in Shirka Wadajirka ah ee Infrastructure, halkaa oo ay la wadaagto Topcon, Siemens iyo Microsoft waxay soo bandhigaan isbeddelada Isbahaysiga Pavilion iyo abaalmarinta mashaariicda ugu fiican ee ku soo cusboonaaday berrinka Geo-engineering.
Isku xirkeeda dhow ee amni waxay noqon doontaa Bentley's ContextCapture, oo ah qaab dijitaal ah oo lagu sawirayo hantida kaabayaasha magaalooyinka ee metelaya xogta GIS, moodooyinka dhulka iyo BIM, oo lagu qaabeeyey adeegyada Cloudwin new cusub, ee lagu soo bandhigay shirka. Sharad xiiso leh, waqti ay labada shirkadood ee waaweyn ee 'ESRI' iyo 'AutoDesk' saf u galaan sida tartamayaasha kale ay u samaynayaan deegaanno la taaban karo, iyadoo loo wajahayo caqabadaha GIS-CAD, ee horumarinta BIM.
Waxay noqon doontaa muhiim in BentleySystems ay sameyso is waafajin dhameystiran oo kaliya ma ahan xiriirka, laakiin sidoo kale qaabka-i, maadaama ay si guul leh ku gaartay xalal kale oo ay heshay. Tani waxay noqon doontaa caqabad adag, gaar ahaan isbeddellada aan aragno; halkaas oo xalalka tartamaya ee GIS ay qaateen akhriska saxda ah ee isbeddelka websaydhka, in kasta oo uu ku guulaystay meeleynta barnaamijka softiweerka, xaalad ah in lagu gaaro isku dheelitirnaanta waa inaysan sahlaneyn, kahor inta isticmaaleha u muuqda mid aad u dheereeya waqtiga Waxay qaadataa in la haajiro oo la fududeeyo wax walba websaydhka cusub.
Anigoo ku hadlaya magaca Bentley, Phil Christensen, madaxweyne ku xigeenka sare ayaa yiri:
Isticmaalayaashayada magaalooyin badan waxay codsanayeen awoodaha lagama maarmaanka u ah waxa ay hay'adda9 ay si guul leh uga hirgalisay Sweden oo dhan, si ay uga faa'iideystaan ​​barnaamijyadooda moodel qaabeynta dhabta ah. Xaqiiqdii, marka aan isku darano awooda sawir qaadista ee Bentley ContextCapture -kuwaas oo ay ku jiraan sawirada hybrid oo ay heshay cutubyo madax-bannaan- Iyada oo la adeegsanayo teknoolojiyadeena Xogta Jawiga leh ee isku xirka (CDE) ee is dhexgalka geospatial ee BIM, waxay ka dhigayaan magaalada Twins Digital Twins adeeg hufan oo hufan.
Xaqiiqda iyo 'qaab-dhismeedka' CityPlanner waxay bixisaa xalka webka ee saxda ah si loogu oggolaado macluumaadka in loo beddelo oo loo ilaaliyo hab la xakameynayo oo sax ah.
Hambalyo loogu talagalay dadka isticmaala Microstation, kuwaas oo awoodi doona in ay filaan farsamooyinka cusub ee juquraafiyadeed ee isku dhafan warshadaha AECO oo hadda ku shaqeeya ProjectWise iyo AssetWise.
Post Previous" Hore Xirfadaha in Mashruuca Rayidka ahi uu ka helo mulkiilaha dhismaha
Post Next Horumarka Kacaanka Dhexe ee Badbaadinta ee horumarinta joogtada ah ee Latin AmericaNext »